Hlala Unyanisekile KuYehova uThixo njengoDavide noYonatan
“Ngamana uYehova angaba phakathi kwam nawe naphakathi kwenzala yam nenzala yakho ukusa kwixesha elingenammiselo.”—1 SAMUWELI 20:42.
UYonatan, unyana kaKumkani uSawule wayenyaniseke njani kuYehova?
Sinokunyaniseka njani kuThixo xa sivakalelwa kukuba umntu osegunyeni akayifanelanga intlonelo yethu?
Sinokunyaniseka njani kuYehova ukuba abanye abasiqondi kakuhle okanye basiphatha ngendlela engafanelekanga?
1, 2. Kutheni ubuhlobo bukaYonatan noDavide bungumzekelo omhle wokunyaniseka?
KUMELE ukuba uYonatan wayemangalisiwe kukubona indlela ityendyana elinguDavide elalikhaliphe ngayo. UDavide wayebulele ingxilimbela yomFilisti enguGoliyati, waza ‘intloko yakhe’ wayisa kutata kaYonatan, uKumkani uSawule wakwaSirayeli. (1 Samuweli 17:57) UYonatan wayengayithandabuzi into yokuba uDavide wayexhaswa nguThixo, ibe ukususela ngoko yena noDavide baba ngabahlobo abasenyongweni. Bathembisa ukuba babeya kuhlala benyanisekile omnye komnye. (1 Samuweli 18:1-3) Ibe ngokwenene, uYonatan wahlala ethembekile kuDavide ubomi bakhe bonke.
2 UYonatan wahlala enyanisekile kuDavide nangona uYehova wakhetha uDavide kunaye, njengokumkani olandelayo wakwaSirayeli. Ibe waba buhlungu xa uSawule wazama ukumbulala umhlobo wakhe uDavide. Wayesazi ukuba uDavide wayesentlango eHoreshe, ngoko waya apho ukuze amkhuthaze ukuba aqhubeke ethembela ngoYehova. UYonatan wathi kuye: “Musa ukoyika; kuba isandla sikaSawule ubawo asiyi kukufumana, yaye wena kanye uya kuba ngukumkani phezu koSirayeli, mna ke ndiya kuba ngowesibini kuwe.”—1 Samuweli 23:16, 17.
3. Yintoni eyayibalulekile kuYonatan ngaphezu kokunyaniseka kuDavide, ibe sikwazi njani oko? (Jonga umfanekiso osekuqaleni.)
3 Ngokuqhelekileyo, siyabahlonela abantu abanyanisekileyo. Kodwa ngaba uYonatan simhlonela nje kuphela kuba wayenyaniseke kuDavide? Hayi, kaloku eyona nto yayibalulekile kuye, yayikukunyaniseka kuThixo. Yiloo nto kanye eyabangela ukuba anyaniseke kuDavide, aze angammoneli nangona wayeza kuba ngukumkani endaweni yakhe. UYonatan wada wamnceda uDavide ukuba athembele ngoYehova. Bobabini bahlala benyanisekile kuYehova, nomnye komnye. Basigcina isithembiso ababesenzile esisesi: “Ngamana uYehova angaba phakathi kwam nawe naphakathi kwenzala yam nenzala yakho ukusa kwixesha elingenammiselo.”—1 Samuweli 20:42.
4. (a) Yintoni eya kusenza sivuye size saneliseke? (b) Siza kuthetha ngantoni kweli nqaku?
4 Nathi simele sinyaniseke kwiintsapho zethu, abahlobo, kunye nabazalwana noodade abasebandleni. (1 Tesalonika 2:10, 11) Kodwa okubaluleke nangakumbi kukunyaniseka kuYehova. Nguye osinike ubomi! (ISityhilelo 4:11) Xa sinyanisekile kuye, siyavuya size saneliseke. Kodwa siyazi ukuba simele sinyaniseke kuye naxa kunzima. Kweli nqaku, siza kuthetha ngeendlela ezine umzekelo kaYonatan onokusinceda ngazo sihlale sinyanisekile kuYehova: (1) xa sivakalelwa kukuba umntu osegunyeni akayifanelanga intlonelo yethu, (2) xa kufuneka sikhethe ukuba sinyaniseke kubani, (3) xa umzalwana othabath’ ukhokelo engasiqondi kakuhle okanye esiphatha ngendlela engafanelekanga, (4) naxa sivakalelwa kukuba kunzima ukugcina isithembiso.
XA SIVAKALELWA KUKUBA UMNTU OSEGUNYENI AKAYIFANELANGA INTLONELO YETHU
5. Yintoni eyabangela kwanzima ukuba abantu bakwaSirayeli banyaniseke kuThixo ngoxa uSawule wayengukumkani?
5 UYonatan nabantu bakwaSirayeli babekwimeko enzima. Uyise, uKumkani uSawule, wayeyekile ukuthobela uYehova, waza wagatywa nguye. (1 Samuweli 15:17-23) Sekunjalo, uThixo wamyeka waqhubeka elawula kangangeminyaka. Ngoko, kwakunzima ukuba abantu bakaThixo baqhubeke benyanisekile kuye ekubeni ukumkani awayemkhethile ukuba ‘ahlale etroneni yakhe’ wayesenza izinto ezimbi kakhulu.—1 Kronike 29:23.
6. Yintoni ebonisa ukuba uYonatan wahlala enyanisekile kuYehova?
6 UYonatan wahlala enyanisekile kuYehova. Khawucinge nje ngoko wakwenzayo ngokukhawuleza emva kokuba uSawule eqalise ukungamthobeli uThixo. (1 Samuweli 13:13, 14) Ngelo xesha, kweza umkhosi omkhulu wamaFilisti ngeenqwelo zokulwa eziyi-30 000, uze kuhlasela uSirayeli. USawule wayenamajoni nje ayi-600, yaye inguye noYonatan kuphela ababenezixhobo. Kodwa uYonatan wayengoyiki. Wakhumbula amazwi omprofeti uSamuweli athi: “UYehova akayi kubalahla abantu bakhe ngenxa yegama lakhe elikhulu.” (1 Samuweli 12:22) UYonatan wathi kwelinye ijoni: “Akukho sithintelo kuYehova ukuba asindise ngabaninzi okanye ngabambalwa.” Ngoko yena nelo joni bahlasela iqela lamaFilisti, baza babulala malunga ne-20 yawo. UYonatan wayenokholo kuYehova waza wasikelelwa. UYehova wenza kwakho inyikima, aza amaFilisti oyika. Ngoko ahlaselana abulalana, aza amaSirayeli aba ayoyisa ngaloo ndlela.—1 Samuweli 13:5, 15, 22; 14:1, 2, 6, 14, 15, 20.
7. UYonatan wamphatha njani uyise?
7 Nangona uSawule waqhubeka engamthobeli uYehova, uYonatan waqhubeka emthobela uyise xa kufanelekile. Ngokomzekelo, wayesiya naye emfazweni ukuze bakhusele abantu bakaYehova.—1 Samuweli 31:1, 2.
8, 9. Sinyaniseka njani kuThixo xa sihlonela abo banegunya?
8 NjengoYonatan, sinokunyaniseka kuYehova ngokuthobela urhulumente welizwe esikulo, xa kufanelekile. UYehova uyawavumela la ‘magunya ongamileyo’ ukuba asilawule, yaye ufuna siwahlonele. (Funda amaRoma 13:1, 2.) Yiyo loo nto kufuneka silihlonele igosa laseburhulumenteni naxa linganyanisekanga, ibe sivakalelwa kukuba aliyifanelanga intlonelo yethu. Enyanisweni, simele sibahlonele bonke abantu abanikwe igunya nguYehova.—1 Korinte 11:3; Hebhere 13:17.
Enye indlela esihlala sinyaniseke ngayo kuYehova kuxa siwaphatha ngentlonelo amaqabane ethu enoba awamkhonzi (Jonga isiqendu 9)
9 UOlga, udade waseMzantsi Merika, wabonisa ukunyaniseka kuYehova ngokuhlonela umyeni wakhe nangona wayemphethe kakubi.  (Jonga umbhalo osekugqibeleni.) Ngamanye amaxesha, umyeni wakhe wayengamthethisi, ukusuka apho athethe amazwi abuhlungu, kuba nje lo dade eliNgqina likaYehova. Wamgrogrisa nangokumshiya, emke nabantwana. Kodwa uOlga akazange ‘abuyisele ububi ngobubi.’ Wazama kangangoko ukuba ngumfazi olungileyo. Wayemphekela, emhlambela impahla, enyamekela namanye amalungu entsapho yakhe. (Roma 12:17) Ibe maxa wambi wayemkhapha xa esiya kutyelela intsapho yakowabo nabahlobo. Ngokomzekelo, wamkhapha xa wayesiya kumngcwabo kayise owawukwenye idolophu, walungiselela yonke into ababeza kuyidinga. Wamlinda ngaphandle njengoko kwakuqhutywa umngcwabo ecaweni. Emva kweminyaka emininzi, umyeni kaOlga wayeka ukumphatha kakubi ngenxa yomonde nentlonelo awayesoloko enayo. Ngoku uyamkhuthaza ukuba aye ezintlanganisweni, ade amse ngokwakhe. Ngamanye amaxesha naye uyaya ezintlanganisweni.—1 Petros 3:1.
XA KUFUNEKA SIKHETHE UKUBA SINYANISEKE KUBANI
10. Wayazi njani uYonatan into yokuba umele anyaniseke kubani?
10 Xa uSawule wathi uza kumbulala uDavide, uYonatan kwafuneka enze isigqibo esinzima. Wayefuna ukunyaniseka kuyise, kodwa wayefuna ukunyaniseka nakuDavide. Wayesazi ukuba uThixo wayexhasa uDavide kungekhona uSawule, ngoko wakhetha ukunyaniseka kuDavide. Wathi kuDavide makazimele, waza wacenga uSawule ukuba angambulali.—Funda eyoku-1 kaSamuweli 19:1-6.
11, 12. Ukuthanda uThixo kusinceda njani sikhethe ukunyaniseka kuye?
11 UAlice, udade waseOstreliya, kwafuneka akhethe ukuba uza kunyaniseka kubani. Ngoxa wayesafundelwa iBhayibhile, wabalisela abantu bakowabo ngezinto awayezifunda. Wabachazela nokuba uyekile ukubhiyozela iKrismesi. Ekuqaleni babephoxekile nje kuphela, kodwa kamva bamqumbela kakhulu. Babevakalelwa kukuba uAlice akasabakhathalelanga. Umama wakhe wada wathi akafuni nokuphinda ambone. UAlice uthi: “Ndandothukile ibe ndibuhlungu kakhulu, kuba ndandibathanda abantu basekhaya. Nakuba kunjalo, ndagqiba kwelokuba uYehova noNyana wakhe bamele beze kuqala ebomini bam, ndaza ndabhaptizwa kwindibano elandelayo.”—Mateyu 10:37.
12 Asimele sinyaniseke kwiqela lezemidlalo, isikolo, okanye ilizwe, ngaphezu kokunyaniseka kuYehova. Ngokomzekelo, uHenry wayethanda ukudlala ichess esikolweni ibe efuna ukuba yintshatsheli. Kodwa ekubeni wayeyidlala qho ngeempela-veki, wayengenalo ixesha lokuya entsimini nasezintlanganisweni. Uthi waphawula ukuba unyaniseke kwisikolo sakhe ngaphezu kokunyaniseka kuThixo. Ngoko wagqiba kwelokuba ayeke ukudlala ichess.—Mateyu 6:33.
13. Ukunyaniseka kuYehova kungasinceda njani simelane neengxaki zentsapho?
13 Ngamanye amaxesha kusenokuba nzima ukunyaniseka kuwo onke amalungu entsapho ngaxeshanye. Ngokomzekelo, uKen uthi: “Umama wayesele aluphele, ngoko ndandifuna ukumtyelela rhoqo, aze naye amane eza kuhlala nathi. Kodwa yena nomfazi wam babengavani. Ndandingakwazi ukubanelisa ngaxeshanye.” UKen wacingisisa ngoko kuthethwa yiBhayibhile waza waqonda ukuba umele anelise umfazi wakhe aze anyaniseke kuye. Ngoko weza necebo elamanelisayo umfazi wakhe. Wamcacisela ukuba kutheni emele abe nobubele kumama wakhe. Wacacisela nomama wakhe isizathu sokuba efanele amhlonele umfazi wakhe.—Funda iGenesis 2:24; 1 Korinte 13:4, 5.
XA UMZALWANA ENGASIQONDI KAKUHLE OKANYE ESIPHATHA NGENDLELA ENGAFANELEKANGA
14. USawule wamphatha kakubi njani uYonatan?
14 Sinako ukunyaniseka kuYehova naxa umzalwana othabath’ ukhokelo esiphatha ngendlela engafanelekanga. UKumkani uSawule wayemiselwe nguThixo, kodwa wamphatha kakubi unyana wakhe. Wayengaqondi ukuba kutheni uYonatan emthanda uDavide. Ngoko xa uYonatan wazama ukunceda uDavide, uSawule wacaphuka kakhulu, waza wamhlazisa phambi kwabantu abaninzi. Kodwa uYonatan akazange ayeke ukumhlonela uyise. Kwangaxeshanye, wahlala enyanisekile kuYehova nakuDavide awayemkhethile ukuba abe ngukumkani olandelayo kwaSirayeli.—1 Samuweli 20:30-41.
15. Ukuba umzalwana usiphatha ngendlela engafanelekanga, simele sisabele njani?
15 Emabandleni esikuwo namhlanje, abazalwana abathabath’ ukhokelo bazama ukuphatha bonke abantu ngendlela efanelekileyo. Kodwa ke, aba bazalwana abafezekanga. Ngenxa yoko, basenokungasiqondi isizathu sokuba senze into ethile. (1 Samuweli 1:13-17) Ngoko ukuba bayasigweba okanye basiphathe ngendlela engafanelekanga, simele sihlale sithembekile kuYehova.
XA KUNZIMA UKUGCINA ISITHEMBISO
16. Kuxa kutheni apho kufuneka sinyaniseke kuThixo size singacingeli iziqu zethu?
16 USawule wayefuna ibe nguYonatan ongena ezihlangwini zakhe, ingabi nguDavide. (1 Samuweli 20:31) Kodwa uYonatan wayemthanda uYehova ibe enyanisekile kuye. Ngoko kunokuba acingele isiqu sakhe, waba ngumhlobo osenyongweni kaDavide, waza wasigcina nesithembiso sakhe kuye. Enyanisweni, wonk’ ubani othanda uYehova nonyanisekileyo kuye ‘ufunga angajiki, nokuba kubi kuye.’ (INdumiso 15:4) Ngenxa yokuba sinyanisekile kuThixo, siya kuzigcina izithembiso zethu. Ngokomzekelo, ukuba senze isivumelwano somsebenzi simele senze njengoko sigqibile, enoba iimeko zinzima kangakanani na. Naxa sineengxaki emitshatweni yethu, siya kubonisa ukuba siyamthanda uYehova ngokuhlala sinyanisekile kumaqabane ethu.—Funda uMalaki 2:13-16.
Ukuba senze isivumelwano somsebenzi, siya kwenza njengoko sigqibile kuba sinyanisekile kuThixo (Jonga isiqendu 16)
17. Likuncede njani eli nqaku?
17 NjengoYonatan, sifuna ukunyaniseka kuThixo nokuba sele kinzima. Ngoko masihlale sinyanisekile kubazalwana noodadewethu, xa besidanisa. Oko kuya kuyivuyisa intliziyo kaYehova, kuze nathi kusenze sonwabe. (IMizekeliso 27:11) Sinokuqiniseka ukuba uya kusoloko esenzela okona kusilungeleyo, aze asinyamekele. Kwinqaku elilandelayo, siza kufunda ngabantu bexesha likaDavide ababenyanisekile nababenganyanisekanga.
^  (isiqendu 9) Amanye amagama atshintshiwe.
Ukuhlala sinyanisekile kuYehova: Siyamthanda uYehova ibe siyamthobela ngalo lonke ixesha. Xa kunzima sicinga ngoko afuna sikwenze size simthobele, kuba simthanda ngaphezu kwento yonke
“Amagunya awongamileyo”: Ngoorhulumente namagosa uYehova awavumeleyo ukuba asongamele. Ufuna siwahlonele yaye siwathobele, ngaphandle kwaxa efuna saphule imigaqo yakhe